Global Voices teny Malagasy » Izao No Ataon’Ireo Mpitsoa-ponenana Eo Am-piandrasana Ny Hidirany ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Marsa 2017 11:41 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Tantely
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsimo, Etazonia, Nepal, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Sita Adhikari ao amin'ny ivon-toerana fampitàna an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Fifindràmonina any Kathmandu. Sary: Danielle Preiss
Ito tantara izay navoakan'i Danielle Preiss  ito dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  ny 8 Febroary 2017. Naverina navoaka eto ho ampahan'ny fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Niala tany amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana tany atsinanan'i Nepal i Sita Adhikari ny faramparan'ny volana Janoary. Tokony nanjohy ireo fianakaviany efa any Rochester, New York izy ny 31 Janoary, herinandro latsaka taorian'ny nandidian'ny Filoha Amerikana Donald Trump fampiatoana efa-bolana ny fanomezana toerana ipetrahana ho an'ireo mpitsoa-ponenana.
Raha toa ka miha henjana ao Etazonia ny adin'ny fifindràmonina, i Adhikari kosa miatrika fianarana toro-làlana fitarihana mikasika ny fiainana andavanandro amin'ny fiainan-ko aviny.
“Ny andro voalohany izahay nampianarina momba ny sokajinà tatin-jaza, ahoana ny fampiasa ny tatin-jaza amin'ireo zaza, ho an'ny hafa, ho an'ny olona marary, sy ny sisa. Ary ny fampiasàna ny tatin-jaza sy ny maha zava-dehibe azy. Satria izahay tsy mampiasa tatin-jaza any amin'ny toby, satria izahay manana olana ara-bola. Nahalehibe zaza tsy nisy tatin-jaza izahay, noho izany, ampianarina mikasika ny tatin-jaza izahay,” mamaky ireo naoty nalainy tamin'ny fianarana mahery vaika nataony mikasika ny fiainana any Etazonia i Adhikari.
Tao amin'ny ivon-toerana tetezamita fampitàna, izay tantanan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Fifindràmonina (IOM) any Kathmandu izy, mandrapahatongan'ny sidiny. Eo amin'ny rindrina iray eo aoriany misy ny sarin'ireo Tendrombohitra Himalayan; eo amin'ny ilany, takelaka misy ireo zavatra hita any Etazonia, tafiditra amin'izany ny Tsangambaton'ny Fahalalahana.
Adhikhari, izay Bhutane, milaza fa ny toro-làlana fitarihina nomena azy dia maharakotra ihany koa ny satan'ny mpifindra monina sy ny làlana arahina hahatongavana amin'ny maha olompirenena , ary nampianatra azy mikasika ireo zo sy adidin'ireo Amerikana mponina ara-dalàna. “Zo hiteny, zo hiasa, karazana zo rehetra sy ireo andraikitray,” hoy izy manazava.
Mijanona ao amin'ireny trano fatoriana ao Nepal ireny ireo olona miandry ny sidiny hankany amin'ireo firenena toa an'i Etazonia, Kanadà ary Aostralia, sady mamita ireo kilasy fitarihana sy ireo fizahàna fahasalamana. Entitra ireo fepetran'ny fitsidihana: 10 minitra ihany no afaka mihaona amin'ireo mpitsoa-ponenana ireo mpitsidika, ary tsy maintsy mijanona eo amin'ny tobin'ny mpiambina.
Efa mihoatra ny tokana sahady ny endrikendrika Amerikana nalain'i Adhikari: Nosoloiny lobaka mitsipitsipika efa-joro ireo akanjony misarisarim-bonikazo, ary notapahany fohy mangirangirana ilay volony lava. Nivadika nankamin'ny fibahanana eo amin'ny fifindràmonina, mazava ho azy, ny resakay. Nanontaniako an'i Adhikari raha fantany ny antony nilazàna tamin'ireo mpitsoa-ponenana hoa naato ny fanomezana toerana ho azy ireo.
“Satria tonga ao Etazonia ny filoha vaovao, mieritreritra aho hoe hanao fanamarinana izy, hamarininy angamba araka ny eritreritro ireo toerana tsy ara-dalàna, ka noho izany, eny, natsahatra kely aloha,” hoy izy. “Tsara izany, satria tokony horaisina ireo [mpitsoa-ponenana] tena izy, tsy tokony horaisina ireo mpanao hosoka, mieritreritra aho fa tokony hosaziana izy ireny.”
Fa raha miomana ny hisidina i Adhikari, ny fianakaviany any Rochester kosa mikorontan-tsaina manontany tena hoe avela hiditra ao Etazonia ve izy.
“Nanomboka ny Zoma alina nanaovan'i Trump sonia ilay didy, tsy afaka natory… aho,” hoy ny anadahin'i Adhikari, Yogesh Adhikari. “nandefasako imailaka daholo ny rehetra: nandefasako imailaka ny IOM, nandefasako imailaka ny UNHCR [ny masoivoho Iraisampirenena misahana ny mpitsoa-ponenana ], nandefasako imailaka ny Trano Fotsy, Nanao izay azoko natao fotsiny aho. Nantsoiko mihitsy aza ny ACLU [American Civil Liberties Union] (Sendikan'ireo Fahalalahana Sivily Amerikana)!”
Nifindra tany Rochester, New York, ny taona 2008 i Yogesh Adhikari ary efa olompirenena Amerikana ankehitriny. Milaza izy fa tsy nahazo valiny mihitsy izy taorian'ny nametrahana voalohany ny fibahanan'i Trump, raha mbola hahazo mankany ny anabaviny na tsia, noho izany, nanomana efitra tao an-tranony izy ho azy sy ireo zanany roa, ary nanantena.
“Ny tsy fahazoana valiny no tena zavatra mamaky fo indrindra,” hoy i Jen Smyers, tale mpisolovava ny Church World Service (CWS). Miara-miasa amin'ny Departemantam-panjakana ny CWS amin'ny fanomezana toerana ireo mpitsoa-ponenana any Etazonia. Milaza i Smyers fa ny ankamaroan'ireo olona — na ireo mpitsoa-ponenana mihitsy aza — tsy tonga saina amin'ny fahamaroan'ny fanamarinana atao ankehitriny mialohan'ny hahazoana fahazoandàlana mankany Etazonia.
“Mahazo fanamarinana amin'ny anarana sy ny mombamomba anao ianao ary 15 volana ihany io no manan-kery; maharay ny valin'ireo fizahàna ara-pitsaboana ianao ary ireo indray manan-kery miankina amin'ny firenenao, telo ka hatramin'ny enina volana. Mandalo fitsirihana ara-piarovana ianao, izay manan-kery 15 volana. Mandalo tafatafa DHS ianao, izay manan-kery 24 volana monja, mahazo fiantohana ianao, izay manan-kery 12 volana, manan-kery 15 volana ny peta-tondro,” hoy Smyers manazava.
Manan-kery eo amin'ny roa volana mifanitsaka eo monja ireo fahazoandàlana ireo. Noho izany, ho an'ny ankamaroan'ireo mpitsoa-ponenana eo an-dàlam-pifindrana toeran, ny 120 andro fibahanana dia midika fa mila mamerina ireo làlana rehetra indray izy amin'ny hoavy. (Manameloka mandritry ny fotoana tsy voafetra ireo Syriana mpitsoa-ponenana ilay didy nivoaka.)
Fa tena nanam-bitana ny fianakavian'i Adhikari.
Nanome alàlana ireo mpitsoa-ponenana avy amin'ireo firenena fito tsy ahitana silamo maro an'isa , izay notononin'i Trump tamin'ny didiny, hisidina any amin'ny firenena mandra-pahatongan'ny 2 Febroary, ny departemantam-panjakana. Nilaza i Smyers fa mpitsoa-ponenana niisa 875 no nanao izany teo anelanelan'io.
Anisan'ireny i Sita Adhikari.
Nandeha nitsena azy teny amin'ny seranam-piaramanidin'i Rochester ny anadahiny, Yogesh. Tany, tamin'ny antso an-tariby, mbola nilaza ihany izy fa mbola tohina hoe tena ho avy tokoa izy.
“Tsy fantatray hoe ho avy izy, satria izahay tsy nmanana fifandraisana taminy, tsy nanana finday izy ary nanantena fotsiny izahay hoe ho ao izy androany rehefa mankaty izahay,” hoy izy nihomehy.
Eritreretin'ilay masoivoho Catholic Family Center (Ivon-toeram-Pianakaviana Katolika) mpitady toerana ipetrahana izay nitsena an'i Adhikari sy ireo zanany tany Rochester, fa izy ireo no mety andiany farany ato ho ato. Fa ny ampitson'iny, namoaka didy ny mpitsara federaly iray any Seattle , ho fampiatoana vonjimaika ilay fibahanana hivezivezy manerana ny fanjakana rehetra.
Niara-nanjohy io fanapahan-kevitra io hatreto ireo Fitsarana Fandravàna Didy ao Amerika, ary nikarakara fahatongavana indray ny 17 Febroary ny Catholic Family Center. Mikatsaka ny hahazo sidina mialoha ny fahataperan'ny fe-potoanan'ireo antontan-taratasy, na fivoahana fanapahankevitra vaovao indray, ireo masoivoho any ivelany mpikarakara ireo mpitsoa-ponenana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/02/95516/
 Danielle Preiss: https://www.pri.org/people/danielle-preiss
 nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org: https://www.pri.org/stories/2017-02-08/heres-what-refugees-do-while-theyre-waiting-get-us
 namoaka didy ny mpitsara federaly iray any Seattle: https://www.pri.org/stories/2017-02-04/heres-what-we-know-so-far-about-trumps-immigration-order